🥇 mejuputara ulo akwukwo
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 975
Vidiyo nke logbook lissainging nke dentistry
Denye iwu ndekọ ego nke ezé
Onye ọ bụla gakwuuru dọkịta eze ma ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ ha. Institutionslọ ọrụ ahụike ọhụrụ na-emepe ebe niile - ma multidisciplinary nwere nnukwu ndepụta nke ọrụ ahụike enyere, ma bụrụ ọkachamara pụrụ iche. Ọmụmaatụ, eze ụlọ ọgwụ na eze. Ọ na - eme na ụlọ ọrụ dị otu a mgbe ọrụ ha bidoro anaghị eche echiche banyere idebe ihe ndekọ. Ekwenyere na ọ ga-ezuru ịdekọ akwụkwọ na idebanye aha eze. O di nwute, nke a abughi eziokwu. Ikekwe, na ọkwa mbụ, usoro a maka ịza ajụjụ bara uru. A ole na ole nke ndị ahịa, obere mpịakọta - niile ndị a ihe na-emetụta usoro nke enterprise azụmahịa (ntuziaka ime osisi na-egbu osisi). Otú ọ dị, site na mmụba nke olu ọrụ na mmụba na-arịwanye elu nke dentistry ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike ndị ọzọ, yana mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị ahịa, njikwa dentistry na-eche nnukwu mkpa banyere ịkwalite usoro azụmahịa.
Ihe kpatara nke a bụ enweghị oge iji hazie ihe ọmụma na-abawanye ụba, ebe ọ bụ na ndị dọkịta ezé, ndị na-ejikarị ịdebe ihe ndekọ na aka, oge na-eju anya ịchọpụta na kama ịrụ ọrụ ha kpọmkwem, ha na-aga n'ihu n'ime dejupụta akwụkwọ . Iji maa atụ, dejupụta akwụkwọ ndị ahịa ma ọ bụ eze X-ray ma hazie ihe onyonyo ndị a dịka ntinye dị na ndekọ. Onye njikwa ahụ na-anwa ịnakọta ozi banyere nsonaazụ nke ọrụ eze na-aghọ ezigbo isi ọwụwa maka ndị ọrụ ya. Zọ esi pụọ n'ọnọdụ a bụ mgbanwe nke ụlọ ọgwụ gaa na ndekọ ndekọ ego akpaghị aka. A na-eji akwụkwọ ndekọ ego kachasị mma maka ịmekọrịta usoro azụmahịa nke ijigide akwụkwọ ndekọ eletrọnịkị na akwụkwọ ndekọ X-ray na dentistry na ụlọ ọrụ nke ọma.
Mmepe anyị bụ sọftụwia maka njikwa njikwa yana ụlọ ọrụ dị iche iche na - eji nke ọma eme ihe, gụnyere ụlọ ọgwụ eze na ụlọ ọrụ eze maka ijigide akwụkwọ ndekọ kọmputa nke ndị ahịa na ndekọ ederede X-ray na dentistry. A maara USU-Soft abụghị naanị na Republic of Kazakhstan, kamakwa na mba ọzọ. Arụ ọrụ nke akwụkwọ ndekọ aha USU-Soft edekọ aha ndị ọrịa dị iche iche, interface ahụ dịkwa mma. Akwukwo ederede nke eze ezé nwere ike iji mmadụ rụọ ọrụ ọkwa kọmputa ọ bụla. Ngwa nyocha USU-Soft na-enyere aka ịnọgide na-edekọ ndekọ eletrọniki nke ndị ọrịa ezé ma na-egbochi ndị ọrụ ezé site na mkpa ịchekwa nnukwu akwụkwọ akwụkwọ, yana ọrụ niile na-agwụ ike na ọrụ kwa ụbọchị maka ha, na-ahapụ ha oge dozie nsogbu ndị ka mkpa. N'okpuru ebe a, anyị ewetara gị naanị atụmatụ ole na ole nke ndekọ ndekọ ego na-eji ihe atụ nke ngwanrọ nke ijigide akwụkwọ ndekọ ego elektrọnik na ndekọ ederede nke ihe oyiyi X-ray na dentistry.
Akwụkwọ ndekọ aha eze nke USU-Soft dị ezigbo mkpa maka ndị njikwa. Na ya ị nwere njikwa zuru oke na ọrụ dọkịta ezé. Know maara ego ọ bụla dọkịta na-eweta, yana arụmọrụ nke ndị nchịkwa. Nweta ohere ịchọ isi ike na adịghị ike na ọrụ ndị ọkachamara: onye nyocha ya anaghị agbanwe ọgwụgwọ na ihe ndị ọzọ. Nyocha nke ndị ọrụ niile nwere ọgụgụ isi na nkwupụta nke mgbanwe na-enyo enyo agaghị ekwe ka ị kwụsị ịchịkwa ọrụ ndị na-eme na ezé gị. Kwesighi ịgbakọ ụgwọ ndị ọrụ gị n'onwe gị ọzọ. Ngwa a dabara nke ọma maka ọrụ ahụ maka ike ya ịmehie ihe efu. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkọwa ibu ọrụ nke dentistry ma kesaa ndị ọrịa na ndị ọrụ dịka ya iji hụ na dentistry kachasị dị irè.
Akwụkwọ ndekọ ederede USU-Soft nke dentistry bụ ezigbo enyi ndị nchịkwa. Ọ bụrụ na ị jikwaa oge ndị ezé gị ’oge na mfe, mgbe ahụ, ị kwenyesiri ike na ihe na-eme na dentistry na nke a bụ ihe ịrịba ama nke njikwa na usoro. E wezụga nke ahụ, ị nwere ike ịchọ oge n'efu na ndekọ ndekọ ego nke njikwa ezé eze ma dekọọ ndị ọrịa dịka o kwere mee. N'ezie, ngwa ahụ na-eme ka akwụkwọ ederede dị ngwa. Inwe ndebiri emere ga-eme ka oge ọrụ onye ọrịa belata ma belata njehie ndị enwere ike. Mbipụta akwụkwọ ọnụahịa na ịnakwere ịkwụ ụgwọ maka ọgwụgwọ enyere nwere ike ime nke ọma na ndekọ ndekọ ego. Mgbe oge ụfọdụ nke ọrụ, ị ga-ejide n'aka na mmụba nke ego gị. Anyị maara na gị na ọkachamara n'ịzụ ahịa gị maara ọtụtụ ụzọ iji bulie ego ụlọ ọrụ site na ngwaọrụ ahịa na mgbanwe arụmọrụ. Akwụkwọ ndekọ ego na-emeju ụzọ ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ịdenye aha n'ịntanetị na-azọpụta ndị ọrịa oge na akwara.
Nke a na-enye mmụba gị karma dentistry na ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ site na ndekọ logbook. Ntinye-ntinye na ngwa mkpanaka na akwụkwọ akụkọ email na-eme ka gị na ndị dọkịta na ndị ọrịa nwee mkpirikpi: ị na-echetara ha nkwalite na mbenata, na-ebute ozi ọma, yana usoro. Mmemme ego na-eme ka ikwesị ntụkwasị obi ndị ahịa dịkwuo elu ma gbaa gị ume imekwu ihe ezubere iche. Usoro nzighachi na-enye gị ohere ịdọta ndị ọrịa ọhụrụ n'ọtụtụ buru ibu na obere ụgwọ. Anyị na-enye gị ohere iji mezuo ebumnuche gị nke iweta nzukọ nke ị na-achịkwa n'ọkwa ọhụụ ọhụụ!